कति छ विप्लवसँग हतियार? सुरक्षा निकाय भन्छ ‘हतियारमा खिया लागिसक्यो, अब काम लाग्दैन’ – Setosurya
शुक्रबार ०१, चैत २०७५
काठमाडौं– ‘विप्लवले बन्दुक कति लुकाएको छ भन्ने गरिन्छ। यो कुरा गर्दाखेरी प्रचण्डजीलाई सोध्नुपर्छ। प्रचण्डजीले सबै बन्दुक हामीले बुझाइसक्यौ भन्नुभा’छ। त्यसकारण यो प्रश्न मलाई सोध्नुभएन। तर बन्दुक कति छ? छ/छैन? भन्दा मैले भन्ने गरेको छु, यहाँ (टाउकोतिर हातले देखाउँदै) बन्दुक भयो भने जतिखेर पनि आइपुग्छ। मान्छेको दिमागमा बन्दुक छ भने जतिखेर पनि आइपुग्छ। अहिलेको विश्वमा बन्दुक अभावको महसुस नगर्नुस्।’
‘यसमा सबै हुन्छ। एउटा गाउँमा मात्रै लड्ने काठमाडौंमा नलड्ने भन्ने हुँदैन। काठमाडौंमा मात्रै लड्ने गाउँमा नलड्ने, त्यसो हुँदैन। अहिले गाउँको जनतामात्रै पीडित छैनन्। आजको जो संसदवादी दलहरुले गरिरहेका निर्णयहरु, विदेशीका इसारामा भएका हर्कतहरु त्यसको मारामा सहरका मानिस पनि छन्। त्यसको मारमा किसानमात्रै होइन। बुद्धिजीवी र मध्यम वर्ग पनि छ। मलाई लाग्छ त्यसको मारमा राष्ट्रवादीहरु पनि छन् र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग पनि छ। यी सबैलाई एकताबद्ध गरेर लड्नु आजको संघर्षको स्वरुप हो। त्यसकारण सबैतिरबाट एकैपटक लड्नुपर्छ। गाउँ र सहर भन्ने हुँदैन।’ विप्लवले जवाफमा भनेका थिए।
त्यसबेला केन्द्रीय कमिटीमा विप्लवले दिएका यी जवाफ अहिले मिल्दै गएको देखिन्छ। प्रहरीले पछिल्लो समय विप्लव समूहबाट फुत्तफुत्त अत्याधुनिक हतियार, म्याग्जिन, गोली बरामद गर्नु र विप्लवले हतियारको अभाव नहुने बताउनु संयोग मात्रै हो वा वास्तविकता? त्यो पुष्टि हुँदै जाला। सरकारले विप्लव समूहको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणागरेपछि त्यसको जवाफ समेत विप्लवले दिइसकेका छन्। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले ‘मुखतोड जवाफका लागि पूर्ण रुपले तयार भइसकेको’ बताएका छन्। यसले विप्लव पार्टी हतियार सुसज्जित बन्दै गएको हो त भन्ने प्रश्नसमेत खडा गरेको छ। अझ विगतमा हतियार बरामद भएका केही घटनालाई हेर्ने हो भने झनै शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ।
प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले वार्तामा बोलाउनु औचित्यहिन -विप्लव समुह
केपी ओलीप्रती झलनाथको यस्तो आक्रोस, ‘पार्टी भनेको तपार्इंको घर हो’ ?
निरजले गरे ओलीको टिकट ओली लाई नै फिर्ता ! जाजरकोट एमालेमा बन्यो यस्तो माहोल :
रुपन्देही प्रहरीले भन्यो: तिवारीको हत्यामा मनोज पुनको संग्लनता, पुरानो रिसिइबी कारण
यी हुन प्रदेश नम्बर २ मा एमालेका उम्मेदवारहरु (सूचीसहित)
यी व्यक्तिका कारण ओलीका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा समस्या ! को को हुन् ति व्यक्तिहरु ?
पाकिस्तान एयरको बिमान दुर्घटना
कुलमानमाथि खनियो कर्मचारी संघ, सरुवाको रमाना पत्र नबुझ्न अपील
एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपालले खोले मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्यूका विषयमा यस्तो पोल…..
समयमै कर तिर्ने उत्कृष्ट करदातालाई फलेवास नगरपालिकाको सम्मान
जनस्वास्थ्य माथि गम्भिर खेलवाड गर्दै कुश्मा खानेपानी, अत्याधिक किटनाशक औषधिको प्रयोग गरेर शुद्धिकरण
यी हुन् नेपाली संसद जस्ले श्रीमान लाइ जेलमा हालेर आफ्नै ड्राइभर संग यौनलिला गरेर कारवाहीमा परिन, यसरि भयो पर्दाफास
कालिगण्डकी करिडोर : संसारका सबैभन्दा ठुला अर्थतन्त्रलाई जोड्ने महत्वपुर्ण ट्रान्जिट
सडक बगाएपछि बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध, सकसमा यात्रु
धनगढी उपमहानगरमा विवाद, शुक्रबार रातिदेखि गणना स्थगित
प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षाा मन्त्री पोखरेलमाथी जालझेल गरेपछि बोलचाल नै बन्द ! यस्तो छ कारण :
बागलुङ ढाेरपाटन १ का संगिन जिसीकाे हत्या कि अात्महत्या ? यस्ताे भन्छ प्रहरी……